Feo avy amin’ny “Zimbabwe Plus” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Oktobra 2018 14:59 GMT
Zimbabwe-: Fanontaniana tsy mora valiana ho an'ny antoko MDC, antoko lehibe amin'ny fanoherana ny fitondrana ao Zimbaboe, ny hoe hanohitra sa tsia, arakaraky ny hanakaikezan'ny fifidianana izay ho loholona. Koa satria tsy misy ny fifanarahana mazava tafavoaka, samy namaritra ny fomba fjeriny nandritra iny herinandro ny roa tonta ary hita taratra izy ireny any anatin'ny fifanakalozandresaka ifanaovan'ny bilaogera.
Fanaovana hosoka niverimberina nataon'ny ZANU-PF tamin'ny fifidianana no tanisan'ireo mpanohitra ny fandraisana anjaran'ny MDC. Midika fankatoavana rafitra fikarakarana fifidianana tsy manjary ny fandraisana anjara amin'ireo fifidianana. Ho an'i Captain Marlow,
“Ity no mampisalasala ahy momba azy io: tena ilaina ve ny manapasaka ny mpanohitra noho ny fomba fijery mampiahiahy amin'ny tsy ahafahana milaza izay tianao hambara sy ho heno (ary raha vakianao ireo fanehoankevitra voatanisa etsy ambony, dia toa mampiahiahy tanteraka tokoa)? Tena ilaina ve ny manao izay haha-ara-drariny ny fifidianana iray hafa lalaovin'i Mugabe ho amin'ny tombontsoany sy, miaraka amin'izay, fanamafisana andrimpanjakana tsy azo ihodivirana ny maha-mandringa azy? Tsy henjana be ve ny sandany?”
Tohanan'ity ankolafy ity ihany koa fa ny fandraisana anjara dia tsy hitondra na inona na inona ho fanamaivanana ny olana sedrain'ny firenena: tsy fahampian'ny solika, ny angovo, sakafo,asa, ary ny vola vahiny. Hoy i Green Leader,
“Raha tsy maintsy hisy ny fanovàna, tsy ho avy amin'ny alàlan'ny loholona iray mihitsy, na roa avy amin'ny MDC. Maneho izany ny parlemanta. Tsy hisy fahasamihafàna ao anatin'ny antenimeran-doholona. Eny an-dalambe no hitranga ny fanovàna. Hitantsika nanerana an'i Eoropa Atsinanana ny herin'ny hetsipanoherana atao ampilaminana mba hanesorana fitondràna. Izany no ilain'i Zim raha te-hanana demaokrasia. Tsy hitsabo ny zavatra tsy nanjary vitan'ny fitondran'i Mugabe ny fandaniana vola dolara an-davitrisa amin'ny fanaovana fampielezankevitra ho an'ny fifidianana loholona. Fa ny fanesorana an'i Mugabe tsy ho eo amin'ny fahefana sy ny fisedràna hanohitra azy.
Amin'ny filazana zavatra mifanohitra amin'izay, ny ankolafy izay manohana fa izay rehetra mankany amin'ny fivoarana, na kely toy inona aza, ka tafangona ho any amin'ny fandatsahambato, dia tsara ho an'ny firenena, indrindra fa ireo nihogahoga ny governemantan'i Mugabe izay Shona no betsaka tao anatiny.
“Tsy nanana mpitarika avy aminy mba ho “mpitarika antsika” ry zareo Ndembele. Ho an'ireny olona ireny, ry Mugabe sy ireo Shona maro an'isa mpiray dia aminy (ary ireo Ndebele vitsivitsy ) no mbola mijanona ho “mpitarika an-dry zareo”. Tsy hoe mitady izay hampihenjana ny tady eo amin'ny samy foko aho eto. Maneho ny fientanentanana lalina sy marimpototra izay mety ho atolotry ny antenimieran-doholona aho (indrindra ho an'ny Ndebele ao anatin'ny MDC). Vintana atolotry ny antenimieran-doholona ho an'ny sasany ny fahafahana maka indray izay veriny, na tsy tonga lafatra toy inona aza no fahitàna an'izany.”
Burundi-:Asongadin'i Agathon Rwasa ireo fiantsoan'i Paul Rusesabagina ny vahoaka Amerikàna mba hamporisika ny mpitarika an-dry zareo hihetsika bebe kokoa manoloana ireo habibiana miseho ao amin'ny tanibe Afrikàna, isan'ireny ireo toerana toa an'i Burundi. Nandritra ny diany nitetezany an'i Etazonia, niresaka momba izany tao Iowa i Rusesabagina, ilay maherifo izay ny tantarany no nanosika ny fanatontosana ilay sarimihetsika mahavaky fo Hotel Rwanda.
DRC-:”007 in Africa” malahelo amin'ny esoeso vokatry ny hanoanana manjaka any amin'ny faritra sasany ao RDC raha tondraky ny karazana sakafo samihafa kosa ireo tsena sasany any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
“Eo am-pahitàna ireo ambin-tsakafo mitobaka atao fafy katrana, tsapako fa, raha matin'ny hanoanana ny vahoaka Kongoley any ananona any, dia tsy noho ny tsy fisian'ny hanina — izay tena mampalahelo ahy fatratra tokoa — noho ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fototra no toa antony voalohany mahafaty ny olona eto.”
Akàn'i Sahara Sarah fotoana ny fanitsiana ireo fitsaratsarampoana mazàna ananan'ny olona momba an'i Afrika ary ny hoe toy ny inona izany miasa any izany.
Malawi-: Taorian'ny halatra nanjo tsy ela akory izay ny olona iray mpila ravinahitra tao Malawi, manontany tena ireo bilaogera Geeta sy Mike avy amin'ny Hacktivate momba ny hamaroan'ireo heloka bevava vitan'ireo nanatanteraka izany. Mampiasa saina an'i Geeta ny zavamisy hoe:
“Anatin'ny tranga sasany, ireo masoivoho tena lohalaharana indrindra amin'ny amin'ny fanamaivanana ny olana ara-tsakafo ao Malawi dia nanao fifanarahana tamin'ireo orinasa izay tsy miraharaha akory ny mpiasa ao aminy mba hitantanana io olana io tsy ilàna fanampiana avy any ivelany.”
Anaovan'i Mike fanaporofoana ny fahasamihafàna misy eo amin’ny karama omena an’ ireo mpiambina sy ny fandaniana atrehan'izy ireny isambolana.
Zendana ihany koa izy nahatsikaritra hoe tafiditry ny mozika Mariachi Meksikàna ny tsena Malaoita, tamin'ny alàlan'ireo feo fanairana amin'ny finday.
Roandà-:Tohina i George Conard momba ireo vina nentin'ireo ‘yagi’ na tendro mandeha lalantokana mba hanatsaràna ny fifandraisandavitra any amin'ireo faritra ambanivohitra ao Roandà.